जगदम्बाका मालिकहरु निरन्तर तस्करीमा - Jhilko
काठमाडौं । ‘अर्बपति मान्छे सानोतिनो ठगीमा लाग्ने मान्छे होइनन, के भएर सानोतिनो तस्करीमा जोडिए । आठ दश लाखमा लोभिने केटो होइन, के भएर यस्तो काम गर्न पुग्यो, म छक्क परेको छु । अर्बौको ब्यापार गर्ने सुलभ अग्रवाल यस्तो काममा कसरी लागे ? उनलाई नपुग्दो केही थिएन । उनी स्वास्थ्य सामग्री तस्करीमा जोडिनु आश्चर्यजनक छ ।’
मुलुक लकडाउनमा रहेको समयमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन तस्करी गर्दागर्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका सुलभ अग्रवालको विषयमा उनका बाबु शंकर अग्रवाल लगायतका ब्यक्तिले गरिएका टिप्पणी हुन यी । नेपालका ठूला र चलेका भनिएका सञ्चारमाध्यमले उनी पक्राउ परेको जानकारी दिंदा माथिका बाक्यहरु प्रयोग गरेका थिए । कतिले समाचार लेखेनन, लेखेकाले पनि सुलभको मती बिग्रिएको, यस्तो काम गर्ने मान्छे होइनन, यस्तो काम गर्न आबश्यक थिएन जस्ता फुर्का जोड्न बिर्सेनन । शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बाका नाममा दर्जनौं उद्योग धन्दा चलाएको शंकरका जेठा छोरा तथा उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रहेका सुलभ पक्राउ परेपछि बाहिर आश्चर्यको रुपमा जानकारी दिन खोजियो । तर, शंकर र उनका दुई छोरा सुलभ र साहिललाई चिनेका ब्यक्तिहरु भने यसमा कुनै आश्चर्य ब्यक्त गर्दैनन ।
झिल्को अनलाइनले अग्रवाल बाबुछोराको बिषयमा बुझ्न सम्पर्क गरेका आधा दर्जन ब्यक्तिहरुले सामान्य तस्करीमा सुलभ पक्राउ पर्नुलाई फरक ढंगले ब्याख्या गरे । उनीहरुका अनुसार बर्षौदेखि यी अग्रवालहरु तस्करीमा थिए, जे सामान तस्करी गर्दा बढी फाइदा हुन्थ्यो, त्यही तस्करी गर्थे र गर्छन । तर ठूलो औद्योगिक घरानाको नाममा छुट पाउँदै आएका थिए । अहिले मुलुक लकडाउनमा रहेको र विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको समयमा स्वास्थ्य समग्रीमा बढी फाइदा लिनसक्ने भएकोले चार्टर्ड विमानमा च्यानल मिलाएर अबैध तवरले तस्करी गर्नकै लागि सामाग्री झिकाइएको थियो । अग्रवालले करीव पाँच करोड मूल्यको स्वास्थ्य सामग्री झिकाएका थिए । केही सामग्री बिक्री गरिसकेका छन् र केही बिक्री गर्न बाँकी छ । तर, प्रहरीले बिक्री गर्न बाँकी सामग्री फेला पार्न सकेको छैन । यसका लागि खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको उच्च स्रोतले बतायो । शंकरका बाबुछोराले विगतदेखि नै कर छली, गाडी तस्करी, कवाडी तस्करी, बिद्युत महसुल भुक्तानी नगर्ने लगायतका काम गर्दै आएका छन ।
गाडी तस्करीमा अब्बल !
बार्षिक कारोबार अर्बौ रुपैंया र नाफा नै एक अर्ब रुपैंया भन्दा बढी भएको जगदम्बाका निर्देशक केही बर्षअघि चोरीको गाडीसहित पक्राउ परेका थिए । जगदम्बा स्टिलका कारखानाका सीईओ रोसित उनितथान तथा जीएम कमजीत वर्मालाई पर्सा प्रहरीले केही बर्षअघि सरकारी कागजपत्र किर्ते तथा ठगी गरेको आरोपमा दुबैलाई पक्राउ गरेको थियो । वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट चोरीको गाडी सकारी त्यसको कागजपत्रहरु किर्ते गरी अर्कै गाडीको नाउँमा नक्कली कागज पत्र बनाएको र सो गाडी प्रमोद साहलाई बेचेर ठगी गरेको आरोपमा उनितथान र वर्मा पक्राउ परेका थिए ।
उनितथानले २००५ मोडेलको स्कारपिओ गाडीको वीरगंज भन्सार कार्यालयको पत्र २०६८ र ०६९ को चं.नं. ५२९ मा केरमेट गरी महिन्द्राको २००५ मोडेलको गाडीलाई किर्ते कागजपत्रको आधारमा २०१० मोडल बनाई यातायात कार्यालय वीरगंजबाट कागजात बनाएका थिए । विराटनगरस्थित आरती स्ट्रिप्समा कार्यरत रहेका उनितथानलाई तस्कर विज्ञ भएकै कारण जगदम्बामा सीईओको रुपमा तानिएको थियो । उनितथान डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा प्रमुख स्वकीय सचिव भएका गंगानारायण श्रेष्ठसँग बिशेष सम्बन्ध भएका ब्यक्ति भनी त्यतिवेला मिडियामा आएको थियो । त्यतिखेर कारबाहीलाई सामान्यीकरण गर्न श्रेष्ठले नै भूमिका खेलेको समाचार त्यतिवेला चर्चामा थियो ।
उनितथानले भारतको सिलीगुडीबाट चोरी भई नेपाल आएको गाडीको इन्जिन लगायतका सामानहरु फेरेको समेत आरोप लागे पनि सामान्य कारबाही भएको भरमा छोडिएको थियो । उनितथान तस्करीमा पक्राउ परेपछि शंकरका कान्छो छोरा साहिलले पनि नेताहरुसँग दौडधुप गरेर छुटाएका थिए । जगदम्बा स्टिलले पुराना र काम नलाग्ने गाडीलाई कवाडीको रुपमा र काम लाग्ने गाडीको कागजपत्र परिवर्तन लगायतका काम गरेर तस्करीका गाडी बेच्ने गरेको थियो र छ । कवाडीका सामान मात्र प्रयोग गरेर डण्डी बनाएको कारण जगदम्बाको डण्डी कमसल रहेको भनेर सरकारी निकायले सूचीकृत गर्न खोज्दा पनि शक्तिको आडमा त्यो निर्णय गर्न दिइएको छैन । शंकर ग्रुपको जगदम्बा मोटर्सले अपाचे वाइक बिक्री गर्दै आएको छ । सोही मोटर्सले अरु गाडी पनि बिक्री गर्ने गरेको छ । त्यो गाडी बिक्री गर्ने काम सुरु गर्नुमा चोरीको गाडीलाई अबैध तवरले बिक्री गर्न र पुराना गाडीलाई कवाडको रुपमा प्रयोग गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य हो ।
विद्युतको बक्यौता तिरेन
शंकर ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी जगदम्बा स्टिलले लोडसेडिङको बेला लिएको डेडिकेटेट लाइन अन्तर्गतको एक अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । मुलुकमा लोडसेडिङ भएको बेला पनि चौबीसै घण्टा विद्युत लिएको जगदम्बाले टेबुल मुनिबाट खुसी बनाए पनि प्राधिकरणको महसुल भने हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन । । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलाई अनुचित लाभ दिएर डेडिकेटेट फिडर जडान गरेको जगदम्बाले कवाडी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन स्टिल उत्पादन गर्ने गरेको छ । नेपालको बजारमा कब्जा जमाएको जगदम्बा स्टिलले बिद्युतको मिटर बिगार्ने लगायतका काम गर्ने काम गर्दै आएको बताइन्छ । तर बिद्युतको महसुल भने तिरेको छैन ।
कर छलीमा नेतृत्व
केही बर्ष अघि जगदब्बा स्टिल्सले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को नक्कली विल प्रयोग गरी २५ करोड १७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कर छलेको पुष्टि भएपछि सो रकम तिरेको थियो । । जगदम्बाले जसरी नेपालको बजार कब्जा गरेको छ, त्यसैगरी कर छलीमा पनि सबै व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्ने गरेको छ । नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा जगदम्बा सबैभन्दा बढी मूल्य बराबरको छली गर्ने कम्पनी हो । जगदम्बामा शंकर ग्रुपका शंकर, उनका छोराद्वय सुलभ र साहिलसहित र सौरभ समूहका विष्णुप्रसाद न्यौपानेको समेत लगानी छ । प्रमाणित कर छली प्रत्येक बर्ष केही करोडको हुने गरेको छ भने अप्रमाणित एक अर्ब हाराहारीमा हुने गरेको बताइन्छ । सरकारी निकायले कारबाही गर्न नसकेर मात्र, कारबाही गर्ने हो भने जगदम्बा कारोबार नै गर्न नपाउने गरी कर छलीमा संलग्न हुने गरेको छ । सानोतिनो लगानीका कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकायले जगदम्बाबाट ठूलो कर छली गर्न छुट दिने गरेका छन ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा विशेष सम्बन्ध बनाएका शंकरले नै कर छलीको काम हेर्ने गरेका छन । केही बर्षअघि एक जना नेतालाई १२ करोड रुपैंया दिएर आफूले भनेको काम गराउन अर्थमन्त्रीलाई बाध्य बनाएका शंकरले सो कुरा आफू निकट व्यवसायीहरुलाई अहिले पनि बताउने गरेका छन् । बार्षिक करोडौं रुपैंया कमिशन दिएर अर्ब रुपैंया कर छली गर्नु जगदम्बाको काम हो । कुनै अस्तित्व नभएको मात्र देखाउनको लागि कम्पनी खडा गरेर नक्कली बिल मार्फत रकम लेनदेन गरेर जगदम्बाले कर छली गर्ने गरेको छ । जगदम्बाले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा देखाएको विल जारी गर्ने फर्मको कारोबार स्थल, सम्पर्क व्यक्ति, सम्पर्क टेलिफोन वा अन्य साधन नखुलाई भुक्तानी गर्दा जारी गरिएका चेक जगदम्बाले आफ्नै कर्मचारीको नामबाट काटेर कर छली गर्ने गरेको छ ।
यसअघि आन्तरिक राजश्व विभागसँग वयान दिंदा २८ फर्मसँगको खरिदमध्ये २५ सँगको खरिद वास्तविक नभएको र ती फर्मसँग वस्तु तथा सेवा नलिई विल मात्रै लिएको जगदम्बाका शंकरले स्वीकार गरेको रेकर्ड देखिन्छ । यसबाट नै थाहा हुन्छ, जगदम्बाले कसरी कर छली गर्ने गरेको छ । उदाहरणको लागि जगदम्बाले स्वेता आयललाई चेकबाट भुक्तानी दिने गरेको छ, तर स्वेता आयललाई दिइएको चेक जगदम्बाका आफ्नै कर्मचारीले बुझ्ने गरेका छन् । जगदम्बाले यस्ता धेरै ठगी गर्ने गरेको छ । अर्बौ रुपैंयाको कारोबार गर्ने भनिए पनि सबै क्षेत्रमा तस्करी र ठगी गर्ने गरेको शंकर ग्रुपले दर्जनौं क्षेत्रमा हात हालेको छ ।
यसैले सुलभलाई अहिले सानो मुद्धामा समातेर यस्ता ठूला मुद्धालाई खोतल्न छाडियो भने उनको ठूला गलत धन्दा कायम रहिरहन्छ ।
श्रमिकप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कांग्रेसको माग
विशिष्ट व्यक्ति ओहोरदोहोर हुने पाँच क्षेत्रका प्रचार सामग्री...
अहिले वानेश्वर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरका क्षेत्र, कोटेश्वर, त्रिपुरेश्वर...
ओलीलाई गत १९ गते अस्पताल भर्ना गरी २१ गते मृर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । डिस्चार्ज...
सेवा निवृत हुने उमेर ६० वर्ष पार्दै सरकार
सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा निवृत हुने उमेर ५८वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष...
छोरीको हत्या गरेको आरोपमा बुबा पक्राउ
हुम्लामा ६ महिनाको छोरी हत्या गरेको आरोपमा बुबा पक्राउ परेका छन् । दिनेश चौलागाईँकी...